व्यावसायिक रूपमा कृषिकार्य गर्ने मुक्तकमैया महिलाको सपना «
व्यावसायिक रूपमा कृषिकार्य गर्ने मुक्तकमैया महिलाको सपना
धनगढी-कैलालीका मुक्तकमैया महिलाले आयआर्जनका लागि लोकल कुखुरापालन, तरकारीखेती लगायतका कृषिकार्य गर्न थालेका छन् । लोकल कुखुरापालन र तरकारीखेतीबाट आयआर्जन हुन थालेपछि उनीहरूले सो व्यवसायलाई बृहत् बनाउने सपना उन्न थालेका हुन् ।
सानोखोरमा सातवटा माउबाट लोकल कुखुरा पाल्न थालेकी कैलारी गाउँपालिका–६, हिरापुर मुक्तकमैया शिविरकी गीता चौधरीले अहिले लोकल कुखुराको संख्या चार गुणा बढाएकी छिन् ।
उनले भाले कुखुरालाई खसी पारेरसमेत पाल्ने गरेकी छन् । गीताजस्तै हिरापुरका १९ जना, कैलारी–८, खैरीपुर मुक्तकमैया शिविरका १०, गौरीगंगा नगरपालिका–४, चनौराका १२ जना महिलाले लोकल कुखुरापालन तालिम लिएर कुखुरापालन थालेका छन् । थोरै संख्यामा लोकल कुखुरा पालेका उनीहरूले धेरै संख्यामा लोकल कुखुरा पाल्ने सपना बुन्न थालेका हुन् ।
सातदेखि १४ वटा माउ पालेर लोकल कुखरा पाल्न थालेका उनीहरूले मुक्तकमैया महिला विकास मञ्चको सहयोगमा व्यवस्थित खोरसमेत बनाएका छन् । मञ्चले उनीहरूलाई लोकल कुखुरा पाल्ने र भाले कुखुरालाई खसी पार्ने तालिमसमेत दिएको छ ।
थोरै पाल्दा पनि राम्रो आम्दानी भएपछि उनीहरूले बृहत् रूपमा लोकल कुखुरा पाल्न हौसिएका छन् । “खसी पारेको एउटै कुखुरा दुई हजारभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ,” गीताले भनिन्, “खसी नपारेको भाले पनि दुई हजारसम्ममा बिक्री भयो । तर थोरै पालेको हुनाले महिना एउटा–दुईटा बिक्री गरेर खर्च चल्दैन । धेरै पाल्न सके व्यवसाय नै लोकल कुखुरापालन बन्छ ।”
खैरीपुरकी उशा चौधरीले पनि १४ वटा लोकल कुखुरा राखेर पाल्न थालेकी छन् । उनलाई पनि लोकल कुखुराको माग धेरै रहेको महसुस भएको छ । “थोरै कुखुरा छन् । यिनीहरुको रेखदेख गर्ने कि आफ्नो काममा जाने दुविधा छ,” उशाले भनिन्, “अरु कामभन्दा कुखुरा पाल्दा आम्दानी राम्रो हुन्छ । गाउँपालिकाबाट सहयोग भए महिनामा २०÷२५ वटा कुखुरा बेच्न पाउने गरी पाल्ने सोच छ ।”
कैलारी गाउँपालिकाको पशुपन्छी विकास शाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद चौधरीले तत्कालै गाउँपालिकासँग व्यवसाय विकासमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम नभए पनि किसानहरू गाउँपालिकामा सम्पर्क गरेमा निःशुल्क रूपमा औषधि र प्राविधिक सहयोग गर्न सकिने बताए । कैलारी र गौरीगंगाका मुक्तकमैया महिलाहरूले आयआर्जनका लागि लोकल कुखुरापालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन र तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन थालेका छन् । उनीहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेती समेत व्यावसायिक रूपमा गर्न थालेका छन् ।
गौरीगंगा–३, जुनेली मुक्तकमैया शिविरका २४ जना महिलाले विगत केही वर्षदेखि निरन्तर तरकारीखेती गरिरहेका छन् । उनीहरूले नजिकै रहेको चौमाला तरकारी संकलन केन्द्रमार्फत् तरकारी बिक्री गरिरहेका छन् । सम्झना महिला कृषक समूहकी अध्यक्ष शारदा चौधरीले सातामै दुई ट्रक तरकारी बेच्ने गरेको बताइन् । तर संकलन केन्द्रले कम मूल्य दिने गरेको उनको बुझाइ छ ।
जुनेली शिविरमा सिँचाइको समस्या छ । “एउटै बोरिङ छ । यो पनि गर्मीमा सुक्छ,” शारदाले भनिन्, “भरपर्दो सिँचाइ व्यवस्था भएमा हाम्रो जीवन गुजारा गर्न तरकारीखेतीले सहयोग गर्ने थियो ।” गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले नगरपालिकाले कृषिका लागि सिँचाइमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले सूचना खुलेपछि सम्पर्कमा आउन मुक्तकमैया महिलालाई आग्रह गरिन् ।
मुक्तकमैया महिलाको आयआर्जन वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको मञ्चले हिरापुरमा लोकल कुखुरापालन र तरकारीखेती, खैरीपुरमा लोकल कुखुरा तथा चिया नास्तापसल, कैलारी–२, सम्झाना शिविरमा २४ जनालाई बाख्रापालन, जुनेलीमा तरकारी खेती, गौरीगंगा–१, लठैया शिविरमा बंगुरपालन, चनौरामा लोकल खुकुरापालन, वडा नं. ४ कुट्टी कटानमा बंगुरपालन र तरकारीखेतीका लागि सहयोग गरेको छ ।
मञ्चका कार्यक्रम संयोजक इन्द्र चौधरीले आजआर्जनका लागि व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास गर्न मद्दत पुग्ने गरी क्लस्टर निर्माण गरी सहयोग गरिरहेको बताए । उनले प्रत्येक शिविरमा सम्भावना अनुसारको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि फरक फरक शिविरमा फरक फरक खालको सहयोग गरेको बताए । उनले कुनै ठाउँमा लोकल कुखरा र तरकारीखेती, कुनै ठाउँमा बाख्रापालन र तरकारीखेती, कुनै ठाउँमा बंगुरपालन वा तरकारीखेतीको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरिरहेको बताए ।
उनले पकेट क्षेत्र बनाएमा मुक्तकमैयाले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजारसम्म सहज हुने भएकाले क्लस्टर निर्माण गरी पकेट कार्यक्रम गर्न थालेको बताए । तरकारी खेतीमा च्याउ, बन्दा, काउली, टमाटरखेती लगायत घर बगैंचा कार्यक्रमअन्तर्गत आँप, कागती, सतलचिनी लगायतको खेतीमा सहयोग गरेको उनले बताए ।
मञ्चको यस कार्यक्रमलाई कैलारी गाउँपालिकाले पनि साथ दिने भएको छ । कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौवाले गाउँपालिकाले समेत पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ल्याएको र मिलेर गर्न सकिने ठाउँमा मिलेर कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताइन् । उनले कैलारी गाउँपालिकाले वडा नं. १ र २ मा बाख्रापालन, ३ मा उखु, ४ मा बेमौसमी तरकारीखेती, ५ मा केराखेती, ६ मा टमाटरखेती, ७ मा थारु आलु, ८ मा च्याउ र ९ मा आलुखेती पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताइन् ।